Kajy ny tavy amin'ny vatana | Nutri Diet
Raha mitady hihena ianao, ny iray amin'ireo refy tokony ho fantatrao dia ny fanisana ny tavy amin'ny vatanao. Zava-dehibe ny fahalalana ohatrinona ny hozatra, rano ary tavy amin'ny vatanao.
Ao amin'ny Internet, mahita rijan-kevitra maro isika izay milaza amintsika ny fomba hahalalantsika azy, na izany aza, tsy dia marina loatra izy ireo matetika na afaka miovaova amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa nefa tsy fantany raha marina izany. Manaraka, lazainay aminao inona avy ireo fomba fikajiana ny tavy vonjimaikao.
Tena zava-dehibe ny fitambaran'ny vatanao, ka holazainay aminao ny fomba ahafahanao manisa mora foana ny isan-jaton'ny tavy.
1 Ahoana ny fikajiana ny tavy amin'ny vatanao
1.1 Kajy izany amin'ny masonao
1.2 Biompedance elektrika
3 Tavy matavy loatra
Ahoana ny fikajiana ny tavy amin'ny vatanao
Ny ambany ny isan-jaton'ny tavy, ao anatin'ny fetra farany ambany Mba ho salama dia ho tsara endrika ara-batana ianao ary ho salama tsara.
Eto izahay no hilaza aminao ny fomba ahafahanao manisa azy mora foana.
Kajy izany amin'ny masonao
Fomba tsotra sy mora ary azon'ny rehetra ampiasaina. Tsy azo atokisana satria vinavina io, ianao ihany no tokony jereo ny sary ary jereo izay karazana vatana itovizanao indrindra.
Ny biompedance dia fomba iray misy mba hikajiana ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana. Ity rafitra ity dia mandefa tsiranoka kely elektrika amin'ny alàlan'ny vatana ary mandrefy ny faharetan'ny fiverenana.
Ny koba tsy misy tavy dia misy rano bebe kokoa, io dia ahafahanao mitarika herinaratra mora kokoa, izay tsy toy ny tavy matavy izay mandoa vola lavitra aminao. Raha manana masin'ny hozatra bebe kokoa ianao ary tsy dia matavy loatra dia hiverina haingana ny tosika elektrika.
Arakaraka ny maha-fohy ny fotoana famaliana, dia vao mainka ho tsara ara-batana isika.
Izany karazana Ny fandrefesana dia manakaiky ary ampiasaina hanombanana raha misy fandrosoana atao mandritra ny sakafo sa tsia. Ny tsara indrindra dia ny fampiasana ity rafitra ity alohan'ny hanombohana ny sakafo hamaritana sy hahafantarana hoe inona ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana izay manamarika antsika, ary avy eo mampitaha azy amin'ny fivoarantsika.
Ity fomba fiasa ity dia mora vidy sy mora ampiasaina ary mety ho fitaovana hanombanana ny fandrosoanao ihany koa. Na izany aza, ny angon-drakitra asehony antsika dia tsy ny azo antoka indrindra amin'ny rehetra.
Misy karazany roa ny biompedance elektrika, iray izay tsy refesina ny vatana iray manontolo, ka tsy manome ny soatoavina ankapobeny fa ny faritra sasany ihany, toy ny vatan-kazo ambany. Ary ilay lehilahy iray hafa dia ilay tania scale, izay refesina teboka efatra samy hafa ka azo atokisana kokoa ny angona vokariny.
Ity fitaovana na rafitra ity dia ampiasaina handrefesana ny hatevin'ny hoditra, amin'ireo faritra samihafa izay mahaliana antsika ny refy. Manampy antsika izany manaova tombana ny isan-jaton'ny tavy ampiasainay amin'ny raikipohy.
Iray amin'ireo fomba mora azo indrindra sy mora vidy ary azo itokisana ihany koa, mila manatanteraka ny metatra fotsiny isika.
Manaraka izany dia holazainay aminao inona ireo rijan-teny ireo, izay tsy maintsy fantatrao mba hanatanterahana ireo kajy ireo amin'ny fomba tsotra indrindra.
Amin'ny pejy Internet marobe dia asehony anao ireo rijan-tsoratra na calculatera ireo mba hikajiana ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana, mila mametraka ny refin'ny haavonao sy fampahalalana bebe kokoa ianao. Mampifandray anao amin'ny a izahay fanaovana kajy mba hahafantaranao haingana.
Ireo calculatera ireo mba hikajiana ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana, dia tsy dia ampiasaina firy, amin'ny fomba mitovy amin'ny kajy BMI, na index body mass.
Tsy azo atokisana mihitsy ireo fomba ireo, fa manakaiky ny zava-misy kely fotsiny isika, ka aleo tsy jerena. Saingy, indrisy, ny fomba azo itokisana indrindra dia ireo izay tsy ananan'ny ankabeazan'ny ankamaroan'ny olona miditra satria lafo be izy ireo.
Tavy matavy loatra
Ny fananana matavy be loatra amin'ny vatana dia mety hiteraka risika amin'ny fahasalamantsika, ary tsy midika izany fa raha manana matavy betsaka ny olona iray dia matavy loatra izy ary ilay iray tsy mahia, mahita olona ambany tahan'ny ny hozatra ary ny tavy matavy be na dia mahia aza.
Raha ny tokony ho izy dia mankanesa any a ny sakafon- mba hahafahan'izy ireo manoro hevitra antsika ny karazan-tsakafo tokony hotanterahina, ankoatr'izay, manana milina sy fitaovana azo antoka izy ireo hanondroana ny haben'ny tavy sy hifehezana ny fivoarantsika.
Manaova fanatanjahan-tena farafahakeliny intelo isan-kerinandro, safidio izay tianao indrindra, manomboka amin'ny mandeha, milomano, bisikileta na manao andian-tantara ao amin'ny gym. Araho amin'ny sakafo mahasalama foana izany, izay misy ny vondrona sakafo rehetra hisorohana ny tsy fahampiana amin'ny karazana rehetra.
Ny vatana dia tsy maintsy manangona tavy, na amin'ny teny hafa, tsy maintsy manana tahiry matavy izy io mba ho salama hatrany, na izany aza, rehefa mihoa-pefy isika dia mety hiteraka aretina toy ny hatavezina, diabeta, avo triglycerides, lalan-dra voadona, havizanana, harerahana, apnea matory, mijaly noho ny aretin'andoha be sns.
Noho izany, safidio ny fomba iray salama tsara ary manomboka mikarakara ny tenanao anio.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Kajy ny tavy amin'ny vatana